१.२० करोड आप्रबासीलाई अमेरिकाले देश निकाला गर्ने, नेपाली पनि फर्किनुपर्ने Bizshala -
काठमाण्डौ । अमेरिकाले गैरकानूनी रुपमा बसोबास गर्दै आएका लाखौं आप्रबासीलाई देश निकाला गर्ने भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार एक ट्वीटमार्फत यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
अमेरिकाको यो कडा कदमका कारण त्यहाँ गैरकानूनी आप्रबासीको रुपमा बसोबास गरिरहेका संसारभरका मानिस झै सयौं नेपालीहरु समेत प्रभावित हुनेछन् । अमेरिकामा गैरकानूनी आप्रबासनमा रहेका नेपालीको संख्या समेत निकै रहेको अनुमान गरिन्छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अध्यागमन र भन्सार कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीका अधिकारीहरूले अर्को सातादेखि आप्रवासी हटाउने अभियानको थालनी गर्ने ट्वीटमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
‘चाँडोभन्दा चाँडो उनीहरू(गैरकानुनी आप्रबासी)लाई हटाइनेछ।’ ट्रम्पले ट्वीट गरेका छन् ।
आफ्नो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै मेक्सिकोसँग जोडिएको सीमानामा पर्खाल लगाउने विषयमा निरन्तर वकालत गरिरहेका ट्रम्पले आप्रबासी रोक्न पछिल्लो समय मेक्सिकोले गरिरहेको कडाईको प्रशंसा गरेका छन् । मेक्सिकोले निकै कडा आप्रबासी कानूनमार्फत यस्ता मानिसहरुलाई रोक्ने निकै राम्रो प्रयास गरिरहेको छ । उनले भनेका छन् ।
एक तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकामा अहिले झन्डै १ करोड २० लाख गैरकानुनी आप्रवासी रहेका छन्। तीमध्ये पनि सबैभन्दा बढी मध्य तथा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकका छन्।
यी हुन् विश्वकै १० ठूला तेल उत्पादक देशहरु, कति–कति छ हिस्सा ?
काठमाण्डौ । केही समयअघि तेल उत्पादन क्षेत्रमा ड्रोनको सहायताले...
यस्तो छ जापानको जीवनशैली, के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइन्न ?
-प्रकाश बञ्जारा युएई । जापान सँसारको एउटा यस्तो देश हो, जहाँ जान र...
अमेजनको दुई महिनाको कारोबार ‘अलीबाबा’ ले एकैदिन ‘सिंगल डे
काठमाण्डौ । चीनको ई–कमर्स कम्पनी अलीबाबाको ‘सिंगल डे सेल’ मा...
शाङ्घाई (रासस-एएफपी) । चिनियाँ उपभोक्ताले एकै दिन सोमबार १ अर्ब...
विश्वकै ठूलो सिंगल डे सेल, ३० मिनेटमै १० अर्ब डलर बढीको कमाई
विश्वकै ठूलो इकमर्स कम्पनी अलिबाबाको ‘सिंगल डे सेल’को शुरुवात...
स्वदेशी ब्रान्ड पतञ्जलिले विदेशी कम्पनीसँग साझेदार गर्ने,
काठमाण्डौ । आफूलाई स्वदेशी ब्रान्ड तथा विदेशी ब्रान्डको विकल्प...
विश्वकै ठूलो ई–कमर्स कम्पनी अलीबाबा १५ अर्ब डलरबराबरको आईपीओ
काठमाण्डौ । विश्वकै ठूलो ई–कमर्स कम्पनी अलीबाबाले नोभेम्बरको...
विश्वका अर्बपतिहरुको सम्पत्ति घट्यो, एसियामा सबैभन्दा बढी
काठमाण्डौ । सन् २०१८ मा विश्वका अर्बपतिहरुको कुल सम्पत्तिमा गिरावट...